R/W hore oo soo dhaweeyay dib usoo Celinta xiriirka Kenya | KEYDMEDIA ONLINE
R/W hore oo soo dhaweeyay dib usoo Celinta xiriirka Kenya
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid ayaa soo dhaweeyay dib usoo celinta xiririka Kenya, oo mudo lix bilood hakad ku jiray.
"Dib u soo nooleynta xiriirkii diblomaasiyadeed ee Kenya waa war farxad leh waxaanan jecelahay inaan bogaadiyo dadaallada Qatar. Si loo xoojiyo ganacsigeenna oo aan u guda galno geeddi-socodka horumarka, waxaa lagama maarmaan ah in dib loo soo nooleeyo xiriirkeenna diblomaasiyadeed ee aan la leenahay adduunka," ayuu yiri Cumar C/rashiid.
Kenya ayaa waxay sheegtay in Soomaaliya kala dhaxeeyo xiriir soo jireen ah, oo qoto dheer, islamarkaana ku dhisan deris wanaag iyo iskaashi sidaas darteedna ay ku faraxsan tahay in mar kale labada dal dib u amba-qaadaan xiriirkooda.
Dowladda Soomaaliya ayaa go'aankan shaaciyay todobaadkii hore kadib markii wafdi ka socda Qatar oo uu hogaaminayo Ergeyga Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalkaas u qaabilsan la-dagaalanka argagaxisadda iyo dhex-dhexaadinta Mutlaq Al-Qahtani uu yimid Muqdisho.
Amiir Qatar Sheekh Tamim Bin Xamad Al-Thaani ayaa ka shaqeeyay heshiiska labada dowladood, iyadoo ay muuqato inay jiraan ujeedooyin kale oo ku qarsoon arrimaha, oo ay kamid ahaan karto arinta Badda, oo xukuumadda Nairobi aad u daneynayso in lagu xaliyo meel ka baxsan ICJ.